तिब्बती मदिराको आयात रोकिएन, दोस्रो बाग्मती बन्दै सेती नदी ! « News24 : Premium News Channel
तिब्बती मदिराको आयात रोकिएन, दोस्रो बाग्मती बन्दै सेती नदी !
बझाङ, २३ भदौ । तिब्बती मदिराको अनियन्त्रित प्रयोगले सेती नदीको मुहान र हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्न थालेपछि साइपाल गाउँपालिकाले मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ  ।
गत असारमा सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले नीतिगत निर्णय गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मदिरा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ  । तर बझाङको उरै भञ्ज्याङ नाका हुँदै तिब्बतको ताक्लाकोटबाट वार्षिक ३ करोड बराबरको मदिरा अवैध आयात हुने गरेको साइपाल गाउँपालिकाको अनुमान छ  ।
तल्कोट गाउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘गाउपालिकको पहिले बैठकबाट नै तिब्बत पितरको नाकाबाट आउने तिब्बती मदिराको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरको थियो, तर अबैद रुपमा मदिरा आयात हुने गरेको पाईएको उनले बताएका छन् ।
उनले भने “गाउपालिको निर्णलाइृ अटेर गरी मदिराको ब्यापार गर्ने र तिब्बती मदिरालाई गाउपालिकामा भित्राउनेहरुलाई प्रहरीचौकीको साथ लिएर भएपनी आफुले यसलाई नियनत्रण गरिन्छ” उनले भने ।
पछिल्लो समय पाईपाल हिमालको छेउहुदै बग्ने सेती नदीको मुहान नै प्रदुषित हुन थालेपछि स्थानीयहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । “तिब्बती मदिरा जिल्लामा भित्रिन थालेपछि सुन्दर साईपाल हिमाल अवलोकनमा आउने पर्यटकहररुमा समेत नकारात्मक प्रभाब पर्ने गरेको छ” साईपाल गाउपालिकाका समााजसेवी बसन्त बोहराले बताए ।
पछिल्लो समय साईपाल हिमालमा आउने पर्यटकको संखयामा दिनानु दिन बृद्धी भएपनि बढ्दै गएको तिब्बती मदिराको आयातले हेर्न लायक ठाउहरु नै कुरुप हुदै गएको छ” उनले भने । पर्यटकको आगमनमा गाउपालिकाले कुनैपन िहालतमा तिब्बती मदिराको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने समाजसेवी बसन्त बोहराको भनाई छ ।
यो बाटो भएर करिब २५ हजार भेडाच्याङ्ग्रा, २ सयभन्दा बढी खच्चर, चौंरी र भरियामार्फत यो परिमाणको मदिरा बझाङ भित्रिने गर्छ । यसरी आयात भएको मदिरा आधाभन्दा बढी सेती नदीको मुहान आसपास र जडिबुटी संकलन क्षेत्र रहेको उच्च हिमाली भुभागमा खपत हुने गर्दछ  ।
यार्सा तथा जडिबुटी संकलक, उरै भञ्जाङको बाटो भएर चीनको तिब्बत जाने यात्री र यस क्षेत्रका नदी किनारमा खोलिएका अस्थायी होटलहरूले मदिराका बिक्री गर्ने गरेका छन् । मदिरा खाली बोत्तल सेती नदीको मुहान क्षेत्रमा जथाभावी फाल्ने गरेका छन् ।
सीसाका बोतल र कुहिने तथा नकुहिने फोहोरहरू सेती नदीमा बिसर्जन गर्ने गरेको कारण नदीमा फोहोर थुप्रिँदै गएको हो । यदी यो क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन र तिब्बती मदिरालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सेती नदी केही समयपछि फोहोर बग्ने नालामा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
जिल्लाको सोन्दर्यको एक महत्वपूर्ण नदीमा पछिल्लो समय फोहोर थुप्रिदै जाँदा कुनै दिन यो नदी पनि दोस्रो बाग्मती बन्नेका कुनै दुईमत छैन् ।